Ukukhishwa kwe-Tube ye-Copper Tube kunye ne-RF yoHulelo lweNkqubo
Ikhaya / izicelo / Ukunyuselwa kweNkcazo / Ukwenziwa kweTyhubhu yeCopper yeCandelo
Udidi: Ukunyuselwa kweNkcazo tags: ityhubhu yobhedu emiselweyo, umbhobho wobhedu ohambisa induction, ityhubhu yobhedu isetyenzisiwe, Umbhobho wobhedu okomayo, ukuhambisa umbhobho wobhedu ukuhanjiswa, ityhubhu yobhedu, ityhubhu yobhedu isetyenzisiwe, Inkqubo yokumiswa kwebhubhu yobhedu, ityhubhu yobhedu oluphezulu, induction annealing ityhubhu yobhedu, isantya esiphakathi sokungenisa ityhubhu yobhedu
Ukukhupha i-Annealing Copper Tube kunye ne-High Frequency Induction Heating System
Injongo Ukufudumeza zombini iziphelo zetyhubhu yobhedu ukuya kwi-anneal ithambe kangako 1.5 ”(38.1mm) ukusuka esiphelweni kwaye kugcinwe ubulukhuni ecaleni kwesihlomelo
I-1.625 ye-Material "(41.275mm) dia x 24" (609.6mm) ityhubhu yobunzima obude
Ukushisa 1500 ºF (815.5 ºC)
Inkqubo Iikhoyili ezi-helical ezine zisetyenziselwa le nkqubo yokubamba. Umbhobho wobhedu ubekwe kwi-coil kwaye amandla asetyenziswa kwimizuzwana eyi-7.5. Kwimizuzwana eyi-3.75 ityhubhu yobhedu ijikelezisa isiqingatha sethuba lokuqinisekisa ukuqiniswa okufanayo. Ubhedu yityhubhu icinyiwe kwangoko ukuqinisekisa indawo ebiyelweyo kuphela
1.5 ”(38.1mm) ukusuka esiphelweni setyhubhu. Umbhobho emva koko utyibilikisiwe ukuze ungene kwelinye icala.
• Ukusetyenziswa kolawulo lokushisa kwindawo ethile
• Ukukhawuleza kwenkqubo, ukunyuka kwemveliso
Ukukhupha i-Annealing Steel Pipe kunye ne-Tube
Ukukhupha i-Annealing Shaft Ekupheleni
Ukukhupha i-Annealing Nuts
Ukunxibelelana kwe-Annealing Brass